Home » Creative Writing » ခြေဖဝါးတော် နုနု – Shoes
ကိုယ်တက်ခဲ့ရတာ နယ်ကျောင်းး၊ ဘာ အလှပြင်လို့မှ မရ၊ လက်ဝတ်ရတနာမဝတ်ရ တဲ့ အချိန် ၅ တန်း လောက်ကတဲ့ မွေးမေလေ့က ရှူးလေးတွေ စီးခိုင်းတာ။ တောမှာတော့ စတားပေါ့လေ။
လုံချည်နဲ့ ရှူး လိုက်လိုက်မလိုက်လိုက်ပျော်ပျော်ဂျီးကို ပဲတွေပေးတာ ဆိုတာ။
အရင်က မိန်းကလေးတွေ ခြေ တစ်လှမ်း ဘာ တစ်သန်း ဘာညာ ဆိုတာ ဟုတ်မယ်ဗျ။
ဖိနပ်ကို အသန့် စီးရမှာကို မကြောက်ဘူးး၊ ဒါမှ ဖိနပ်ကို အားနာပြီး ခြေထောက် ကို သ ဖြစ်လို့။
ဘယ်သူမှ ဖိနပ်အဖြူ မစီးရဲတဲ့ အချိန်ထဲက ဖိနပ် အဖြူ ရှာစီးပြီး ခြေထောက် သ နေရတာမို့ မျက်နှာထက် ခြေထောက်တွေက ပိုလှ ပိုသန့်တယ်လို့ အပြောခံရဖူးတယ်။
ဖိနပ် ဒေါက်နဲ့ လူသတ်လို့ရပါတယ်။ တော်တော်တန်တန် ညှို့သကြီးကို သာ ကန်လိုက် ခွေလဲသွားမှာ။ ဟိ။
ဖက်ရှင်တွေကို ပြောင်းပြန် လုပ်ဖူးပါရဲ့။
ထားတော့။ လေပွါးတာလေး ခန ရပ်ပြီး ဖိနပ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို သွားရအောင်။
တဘား ခြေမကွင်းလို့ ခေါ်တာ ဒီလိုပုံမျိုးး
အောက်ခံပြားက လေးထောင့်ကျရင် ပိုလှတယ်။
၇) အတော်မြင့်မြင့် စီးချင်ရင်တော့ အရှေ့ပိုင်း ပလက်ဖောင်းပါ မြင့်တဲ့ ဖိနပ်မျိုး ရွေးရင်တော့ ကိုယ် ဇောက်ထိုးမဖြစ်ဖူးပေါ့။ ငိငိ
Shoe တင်မက Boots ပါ ဆက်ဆွဲပေးပါလို့စ်
ငင်. Shoes ဆိုတာ ယေဘူယျ ခြုံပြောတာလေ.. ???
ဖိနပ်ကတော့ ကိုယ့်ဘွနဲ့ကိုယ် စင်ဒရဲလားဖိနပ်စီးမရတဲ့ခြေထောက် တော်တော်တန်တန် ဆိုးမာရင်ခြေထောက်တန်း ပေါက်တာမို့ လှတာတွေသိပ်ဦးစားမပေးပဲ ပုံရှင်းရှင်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မဲ့ဖိနပ်မျိုးပဲစီးဖြစ်တယ်
ကိုယ်တွေက ဂျူးပိတ်သတ်ဆိုတော့ အရပ်မြင့်ရကြားထဲ ယောက်ကျားတွေကို အားမနာပဲဖိနပ်အမြင့်ကြီးစီးတဲ့မိန်းမဆိုပြီး တ္တုထဲဖတ်ရပြီးထဲက ကလန်ကလားနဲ့ ဖိနပ်အမြင့်ပေါ် မရအရတွယ်တက်တော့တာ
ခုတော့ naturaluzer ဖိနပ်စီးနေတယ်လို့ လာကြွား အဲလေ လာပြောတာ
စိန်စီ ဖိနပ်တွေ ကတော့ ကိုယ် နဲ့ သိပ် အရုပ်ဆိုးးတယ် ??
ဖိနပ်သရဲမို့ ဒီပိုစ့်က အတော်တန်ဖိုးရှိတယ်…
ငယ်တုန်းက ၀န်ခံရရင်.. မိသားစုထဲမှာ ..ကိုယ့်ကို အာရုံစိုက်ခံချင်ခဲ့တာ….။ ထင်သလောက်ဖြစ်မလာတော့ အပြင်ဘက်လှည့်ကရော… ခိ..
ဒီတော့ အနီးစပ်ဆုံးနည်းလမ်းက ဖိနပ်ဖြစ်လာတယ်…။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဂျပုဆိုတော့.. ကွက်စတိပဲ…
ခဲတံအရွယ် ၃လက်မလောက် မြိနေတဲ့ ဒေါက်ကိုစီးပြီး.. မြင်သမျှလူက တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဘယ်အချိန်များ လဲသွားမလဲဆိုပြီး အာရုံစိုက်ခံနေတာမျိုးကို ငယ်စိတ်နဲ့ အတော်ပျော်ခဲ့တာ…။
ဟိုတစ်ခါ ခြံထဲမှာ ထိုင်ရိုက်ဖူးတဲ့ပုံထဲကလို ကာကီရောင်အရင့် ကြိုး အတော်အသင့်ခြေဖမိုးရှုပ်နဲ့ တပြေးညီဖြစ်နေတဲ့ ဖိနပ်မျိုးကို အာရုံရောက်နေတယ်….။ သူက လမ်းလျှောက်ရ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး.. တော်ရုံ Taxi ခ ချွေတာပေးတယ်လေ… (Gladiator လောက် ရှုပ်တာမျိုးတော့ မကြိုက်မိ..)။ ရုံးသွားဖို့အတွက်တော့ ဒါမျိုး စီးဖြစ်နေတယ်…။
ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီး… ပုံစံတစ်ခုရှိတဲ့ဖိနပ်တစ်ရံလောက်စီးလိုက်ရရင်ကို စိတ်ထဲ ကွန်ဖီးဒန့်တယ်…။ ဖိနပ်ရွေးချယ်မှုပုံစံကို ကြည့်ပြိးတော့တောင် အဲ့လူရဲ့ စိတ်ကို ဖမ်းဖတ်ခန့်မှန်းဖူးသေးတာ…
ခုချိန်ထိလဲ ဒီထဲက ဖိနပ်လှလှလေးတွေနဲ့ လျှောက်သွားနေတဲ့ မိန်းခလေးတွေများမြင်ရင် ရောက်တဲ့နေရာရပ်ပြီး လိုက်ငမ်းနေမိတုန်းရယ်…
ဖိနပ်သက်သာရင် တက်ဆီခ သက်သာတယ်ဆိုတာ အဟုတ်ပဲ ??
Posted by Kaung Kin Pyar on Mar 5, 2015
ဒါက အဲဒီ ပို့(စ) က ကိုယ့်ကော်မန့်။
ပြန်ေတာင် သတိရသွားပြီ… ဟီးးးး
လှတပတ ဖိနပ်လေးများ စီးထားပြီဆို မိုးပေါ်ရောက်သလို မြောက်နေတာရယ်…
ဒါနဲ့ စမီးကို ဘူဒူ ဖိနပ်ချပွန်စာ ပေးကြမဲငင်….
အို အို… ရတယ်..
မပြေးစေရဘူး….။ ချပွန်ဆာဒေကို ချစ်လွန်းလို့ ဘေးနားဆွဲထားမှာ….
ဖိနပ်ဝယ်ရင် ဒီဇိုင်းကြိုက်ပဟဲ့ ဆို
အမျိုးသားတွေ အတွက် အတွေ့ အကြုံ စုံလင် လှသော ကော်မန့်ပါတကားးးး
shoe crazy ပေကိုး။
ကြိုးအသေချည်ပြီးမှ စွပ် တာ တော့ မရှိသေးဘူး။
ခုလက်ရှိ မြင်းခွါတစ်ရန်ကို စီးတိုင်း ခြေဖျားလေးထောက်ထောက်ပြီး စီးနေရတယ်၊ နို့မို့နားငြီးလို့
မြို့ထဲ ဘူတာတွေမှာ မနက် ရုံးသွားချိန် ဆင်းကြည့်။
အဲလိုဂွက်ချင်တိုင်းဂွက်လို့ကောင်းတဲ့ မြို့ထဲလိုနေရာမျိုး ကြုံလို့ရောက်ရင်တော့ ဖနောင့်လေးဆောင့်ဆောင့်ပေါက်ပြီး စီးတာပေါ့
မြို့ထဲကလဲ အခါ၅၀မှ၁ခါလောက် ကြုံတော့လည်း ခြေဖျားလေးပဲ အားကိုးနေရတယ် :'(
ဖိနပ်ဆို ချွတ်ရစွပ်ရလွယ်တာမျိုး ရွေးဝယ်တာများတယ်၊ သိတယ်မလား ကိုယ်တွေက ခပ်ပျင်းပျင်းရယ်
ရှူးဆို ကြိုးမချည်ရတဲ့ဟာမျိုး၊ ကြိုးချည်ရတဲ့ရှူးတောင် ချွတ်ရစွပ်ရလွယ်တဲ့အနေလောက် ကြိုးအသေချည်ပြီး စီးတာပါဆို..
ဒေါက်ဆို ဝေါင်ဝေါင်ရှေးတယ် ထွက်နေတဲ့သွား ဘွပြောင်းမစိုးလို့
မြန်မာဖိနပ်ဆို စီးကွင့်မပါ ရိုးရိုးဗြောင်မျိုးလေး သဘောကျတယ်။
ပုံတော်ဖိနပ်တော့ တခါမှမစီးဖူးလို့ ရရင်တော့စီးချင်သား (ရမားလို့ စကားခေါ်ကြည့်တာ ငိငိ)
အရောင်ကတော့ အရင်က အနက်နဲ့နက်ပြာ ဒိုင်ခံဝတ်တယ်၊ ခုတော့ အညိုနဲ့ဝိုင်ရောင် ဓာတ်ကျနေတယ်။
အာ့တွေက ကြာတော့မစီးနိုင်တာရယ် ပြတ်တာမြန်တာရယ်ကြောင့် ခုတော့ quality/comfort ဘက်လိုက်ကြည့်မား စဉ်းစားနေတယ်
စကားမစပ် ဒေါက်ချွန်ချွန်မြင့်မြင့်တွေမြင်ရင် စမ်းစီးကြည့်ဖို့ထက် အဲဒေါက်ကို ဆဆကိုင်ရင်း “ဒါလေးနဲ့ဆို လူကောင်းကောင်းသတ်လို့ရတယ်” ဆိုပြီးစဉ်းစားမိနေတာ နဲနဲများလွန်နေမလားဟင် ??
အရင် ဂျက်လီ ရဲ့ ဟစ်မန်း ကားထဲမှာ ဂျာပွန်စစ်ဗိုယ်ကို ကန်ထည့်လိုက်တဲ့ ဖိနပ်ရယ်။
ရှုကြည် ဓာတ်လှေကားထဲ ကန်တာမြန်းလားးးး သူ့ဝတ်စုံနဲ့ သူ့ဖိနပ်နဲ့ အထာကျနေတာရယ်…။
နောက်ပြီး မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ပြန်တုန်း အိတ်လုတဲ့အခန်းရောပဲ…
အဲဒီ မိုးရွာထဲ ဝတ်တဲ့ စတိုင်
သူတို့ဆွယ်တာနဲ့ so close တောင်ပြန်ကျိချင်သွားပြီ
ကျန်း အသီးဒေကွဲ မနာလိုတိုရှည် tone နဲ့
ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ဂျင်းနဲ့ ၀တ်တာလေး မှတ်သွားတယ်။ ကျော်လည်း အဲ့လိုပဲ ဖိနပ်ဆို ဘရန်းမှ မဟုတ်ဘူး ကိုယ်နဲ့လိုက်မှ ၀တ်တယ်။
ကိုယ့် ခြေထောက်နဲ့ အစဉ်ပြေဖို့ သာ အရေးကြီးတာပဲ။
ဥတု ၃ ပါးစလုံး အကြမ်းခံသုံးစီးနိုင်တဲ့ရဲဘက်တာယာဖိနပ်အကြောင်းလဲ
အလုပ်သိမ်းရင် Osaki ကွင်းထိုး ရေစိုခံ ဆီထိခံ ဖိနပ်ပဲ
တောတွင်းပျော်တို့အကြိုက်က သူများတွေနဲ့ကို မတူတော့ တာ
ဖိနပ် ကတော့ အဲဒီလောက် သိပ် မခရေးဇီး ဘူး။
ကျနော်က ကိုယ့် အတွက်ကို ဆိုရင်တော့
အိမ်နေရင်းတော့ အောကတ္တီပါ လေးညှင်းရောင် … ဒါဗြဲ
HUSH PUPPIES ဖိနပ်လေးတွေ လိုချင်မိ…း)
ရှူး တော့ ဝယ်ဦးမှဘာ
ပုံထဲက Plain toe လောက်ဆို မဆိုးပါဘူးး
ဟိ ရာထူး တိုးရင် သွားဝယ်စီးပစ်ဦးမယ်
ကက်တပလာ က အားကစားဖိနပ်ပုံ ဆေ့ဖတီးရှူးလေး လိုချင်တာလေ။
အနော့် ဖွေးဖွေးကိုတော့ အနော်က ခုံဖိနပ်ကလေး ဆင်မြန်းပေးမှာာာ
ဖင်ထိုင်ခုံပုလေးကိုသာ သဲကြိုးတပ် စီးလိုက်ပါတော့လားး